Uchwepheshe we-Semalt Uyazi ukuthi Ungavimbela kanjani ukufakela kogaxekile ku-Google Analytics
Ugaxekile wokudluliselwa kuthukuthelisa wonke umuntu, ikakhulukazi umuntu oqhuba iwebhusayithi ye-e-commerce. Uma ubheka idatha yakho yewebhusayithi ye-Google Analytics, ungabona amacala wokudluliselwa kogaxekile okuza kusayithi lakho. Kunzima ukulinganisa nokuhlola ukusebenza kwangempela kwemizamo yokuthengisa ye-intanethi - dedicado server.
Iningi lemikhombandlela mayelana nokususa ugaxekile wokudlulisela akubonakali ukusebenza. Ezimweni eziningi, abantu batshale izimali ezimatsheni ezimnyama ze-SEO eziphethayo zinikeza abantu ukuthi bangene ekuthunjweni kogaxekile noma ku-bots. Kunezindlela ezingakusiza ukuthi ususe ithrafikhi yogaxekile yokudlulisela ku-Google Analytics yakho.
Amanye amasu okubhekana nokugaxekile achazwe lapha ngu-Andrew Dyhan, iMenenja Yokuphumelela Kwamakhasimende Semalt .
Kuyini ugaxekile wokudluliselwa
Ugaxekile lokudluliselwa kabusha yi-traffic efika kuwebhusayithi yakho kwezinye izizinda. Ezimweni eziningi, noma iyiphi i-backlinking inikeza idatha yokudluliselwa kogaxekile kumsebenzisi. Ezinye zezizinda eziqukethe ukuvakashelwa kwewebhu okukhohlisayo zivela kubhu noma amanethiwekhi we-bots. Ugaxekile wokudluliselwa lungenzeka ngezindlela ezimbili:
Le spam yokudlulisela ikhombisa ekhasini lakho le-Google Analytics. Ngokufanayo, ukuvakashelwa kwewebhu okukhohlisayo kungabonisa idatha yakho ye-analytics kodwa hhayi kwideshibhodi yakho yewebhu. Lezi zivakashi zekhasi ezingaziwa zifake ukuvakashelwa kwekhasi le-ghost.
Ezinye izizinda zingase zibe ne-bots traffic..Ukuthola ukuvakashelwa kwewebhu kusuka ebhodini kungaholela kuwebhusayithi ukuthola ukuvakashelwa kwamakhasi amaningi emithonjeni engeyona yabantu. Ama-Botnets nabakwa-web crawlers bangaholela emiphumeleni eminingi embi kwi-website yolwazi.
Kuzo zombili izimo, ithrafikhi yokudlulisela phambili iholela emininingwaneni yamanga ngokuqhubeka komkhankaso wokumaketha. Ngaphezu kwalokho, ikhasi eliningi le-ghost elivakashelayo elivela ku-spam lokudlulisela phambili lenza inqubo ye-SEO inselele ukuqapha nokulungisa umgomo wakho ovamile.
Ukususa ugaxekile we-referrer
Abantu bangasusa lo mgwaqo kusuka ku-Google Analytics yabo kulandela izinyathelo ezilula. Enye yezindlela eziphumelela kakhulu zokwenza lo msebenzi ngokubeka ifayili ye-.htaccess kumhlahlandlela wezimpande wesizinda sakho. Leli fayela liqondisa abakwa-crawlers ngendlela efanele yokusingatha izicelo zakho zevava. Abantu abasebenzisa iseva ye-Apache bangasebenzisa imiyalo ethile yokwenza lokho kulungiswa. Ukulawula le nqubo ngokunakekela kubalulekile. Ukudonsa phansi iwebhusayithi yonke kulula kakhulu ngenkathi kusebenza amakhodi.
Izihlungi eziphambili ze-spam zingasiza ekususeni ugaxekile wokudlulisela. Ku-akhawunti ye-Google Analytics, ungasebenzisa lesi sici kumenyu yokuphatha. Ngaphezu kwalokho, ungakwazi ukufaka izihlungi zenkambiso kuthebhu. Lezi zihlungi zingavimbela ithrafikhi evela esizindeni esithile. Kungenzeka futhi ukuvimbela ithrafikhi isebenzisa ikheli le-IP. Umhlinzeki wesevisi we-imeyili ovikelekile angasiza ekutholeni ezinye zokuhlaselwa kogaxekile okubhekiswe kuma-akhawunti we-imeyli yomsebenzisi.
Ugaxekile wokudluliselwa kunganciphisa ukunemba kolwazi ku-akhawunti yakho ye-Google Analytics. Kubalulekile ukususa ithrafikhi yogaxekile yokudluliselwa njengoba lezi ziphumo ezikhohlisayo zingaholela ekudleni kwemithombo. Ngaphezu kwalokho, lo mgwaqo ubangele abantu benze izinqumo ezingalungile mayelana nendlela yomkhankaso wokukhangisa nge-intanethi osebenza ngayo. Kubalulekile kuzo zonke izinkampani noma ibhizinisi ukubhekana nogaxekile wokudluliselwa. Eminye imibono ongayisebenzisa ekuqedeni ugaxekile wokudluliselwa kulesi sikhombandlela.